Coronavirus: nisotro ilay tambavy i Nicolas Dupuis - ewa.mg
News - Coronavirus: nisotro ilay tambavy i Nicolas Dupuis
Tsy diso anjara fa anisan’ireo olona nisotro ilay tambavy “covid organics”, ihany koa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar. Ny alarobia lasa teo izy no nisotro ny anjarany. Nambarany fa miaro ny tenany amin’ny valanaretina coronavirus ny tenany ka izany ny antony hisotroany ilay tambavy vitan’ny Imra. Nampirisika ireo mpilalao sy ny Malagasy ihany koa i Nicolas Dupuis, hisotro izany tambavy izany.
Ankoatra izay, mbola nanentana ny rehetra ihany koa ny tenany hanaja ireo fepetra rehetra navoakan’ny fitondram-panjakana, hiadiana ny tsy hiparitahan’ity valanaretina ity. Anisan’ireny, ny tokony hijanonana ao an-trano, ny fanasana tanana matetika ary ny tsy maintsy hitondrana arovava, rehefa mivoaka ny trano ary tokony hanaja hatrany elanelana 1 metatra. Nankahery ny rehetra ny tenany mba hanao fanatanjahantena rehefa mijanona ao an-trano fa anisan’ny fiadiana mahomby amin’ity valanaretina coronavirus ity izany.
L’article Coronavirus: nisotro ilay tambavy i Nicolas Dupuis a été récupéré chez Newsmada.
Barea - Coronavirus - COVID19 - Nicolas Dupuis
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia 17 febroary teo, ny fampahafantarana ny fandefasana ny tolotra “Ring Tana 90 KV”, mikasika ny famokarana herinaratra. Hanamafisana ny tambajotra iraisan’Antananarivo (RIA) ity tetikasa ity, hitsinjarana ny herinaratra azo avy amin’ny angovo azo havaozina any Sahofika (Amoron’i Mania), Volobe (Toamasina), Ranomafana ary Mahitsy. Hampifandraisina ny herinaratra miainga any Toamasina, Antananarivo, hampitombo ny famatsian-jiro.Ankoatra izany, nalamina ny tsena hanatanterahana ny asa fanaovana lavadrano miisa 46 eto Antananarivo sy ny manodidina. Hovitaina ato anatin’ny fotoana fohy ny asa. Tsiahivina fa misy koa ny fametrahana toerana fanadiovan-drano miisa 10 eto Antananarivo sy ny fanitarana ny toby eny Mandroseza, ho vita amin’ny volana avrily 2021.Njaka A.Ireo toerana 46 hanaovana lava-drano:Ambohidrapeto, Fiombonana, Itaosy, Ampitatafika, Andoharanofotsy, Bongatsara, Alasora, Tsiadana, Ambohimangakely, Ankadikely Ilafy, Sabotsy Namehana, Ambohimanga Rova, Antehiroka, Ivato Firaisana, Anosiala ary eto Antananarivo Renivohitra.L’article Herinaratra: hampifandraisina ny tambajotra Toamasina sy Antananarivo a été récupéré chez Newsmada.
Fampanantenan’ny filoha Rajoelina: hananjo hifidy ireo Diaspora amin’ny taona 2023
Nitohy tamin’ny fihaonana amin’ireo Diaspora natao tao amin’ny masoivohon’i Madagasikara any Paris ny dian’ny filoha Rajoelina Andry tany Frantsa, ny asabotsy teo. Nankasitraka ireo nanoina ny antso tonga maro be naneho firaisankina ny filoha Rajoelina tamin’izany ary niantso azy ireo hiray hina sy fo, hiara-kientana amin’ny andraikitra tandrify azy avy. « Hampandroso ny firenentsika na aiza na aiza misy antsika. Malagasy hatrany isika, mirehareha amin’izany ary tokony ho saropiaro amin’ny fitiavana an’i Madagasikara », hoy izy. Nambarany fa voarainy ny hetahetan’ireo teratany malagasy mila ravinahitra sy miasa any ivelany amin’ny tokony hahafahan’izy ireo mandray anjara amin’ny fifidianana. « Hirosoana ny fandaminana izany handraisanareo anjara amin’ny fifidianana hatao amin’ny taona 2023 izany”. ” Manao “Carte consulaire » any amin’ny masoivoho malagasy sy misoratra anarana aloha ianareo. Aorian’izany vao afaka mifidy“, hoy ihany izy.Tatitry ny asa fampandrosoanaNanao tatitry ny asa fampandrosoana aty Madagasikara koa ny filoha, araka ny Velirano miisa 13. Anisan’ireny ny “Câble téléphérique”, miainga eny Ambatobe mandalo Antsonjombe, Ivandry, Ankatso…. Ny tetikasa Miami any Toamasina, efa madiva ho vita. Eo koa ny kianja Barea, hotokanana amin’ity herinandro ity. Ny asa fanamboaran-dalana, ny ady amin’ny kere any Atsimo, toy ny fametrahana ilay fantsona “pipeline” lehibe miainga any Efao, mandalo Amboasary Atsimo ary tafapaka hatrany Ambovombe Androy. Manampy izany ny ady amin’ny covid-19.Nanitrikitrika ny tsy fanarahan-dalàna ny RMDMAnisan’ny niatrika izany ireo diaspora any Frantsa sy manerana an’i Eoropa, toy ny avy any Pologne, Belzika ary Italia.Tsiahivina fa fanindroany izao no nihaonan’ny filoha tamin’ireo Diaspora any Eoropa. Anisan’izany ny tao Paris, ny volana jona 2019 ary izao ny faran’ny herinandro teo izao.Etsy an-daniny, nanao hetsika tany Frantsa koa ireo Diaspora mpiandany amin’ny mpanohitra, ny RMDM sy ny “Miara-manonja”. Nanitrikitrika ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahombiazan’ny fomba fitantanan’ny mpitondra avokoa ireo nandaha-teny tamin’izany. Nitarika ny hetsika, i Fanirisoa Ernaivo.Synèse R.L’article Fampanantenan’ny filoha Rajoelina: hananjo hifidy ireo Diaspora amin’ny taona 2023 a été récupéré chez Newsmada.
Filohan’ny Antenimierandoholona: « Misasaka ny lalana ka misy ny fingampingana »
Mbola anisan’ny nivoitra tamin’ny lahatenin’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Razafimahefa Herimanana, omaly, tetsy Anosikely ny raharaha nikasan’ny sasany hamono ny filoha. “Misasaka ny lalana ka mipoitra ny fingampingana. Mahaleova mahalasana anefa ianao Andriamatoa filohan’ny Repoblika”, hoy izy, tamin’ny fanokafana ny fovoriana tsy ara-potoana tanterahin’ny parlemanta roa tonta izao. Nanteriny fa olana tsy azo amaivanina ireny fikasan’ny sasany ireny. Hiaraka ho tra-pahavoazana isika vahoaka 26 tapitrisa raha sanatria misy ny mahazo ny filoha. Hirehitra eto isika ka aoka hatsahatra ny fampitahorana harangaranga eto amin’ny firenena fa tsy hahasoa antsika izany, araka ny nambarany.Nampanantena ity filohan’ny Antenimierandoholona ity ary nanome toky amin’ny filoha Rajoelina Andry fa tsy hivadi-belirano ary hanatanteraka ny andraikitra tandrify azy hahatontosa ny velirano ka hahasoa ny vahoaka.Ankoatra izany, niantso ny vahoaka hitandro hatrany ny firaisankina anisan’ny fototry ny fihavanana malagasy. “Mampiavaka antsika koa izany. Ilaina ny fitonina sy i Madagasikara mandry fahalemana mba ho antoky fampandrosoana”, hoy ihany izy.Synèse R.L’article Filohan’ny Antenimierandoholona: « Misasaka ny lalana ka misy ny fingampingana » a été récupéré chez Newsmada.